မြင့်ကျော် | MoeMaKa Burmese News & Media
မြင့်ကျော် - အဖေနှင့် အတိတ်က ပုံရိပ်များ
မြင့်ကျော် - သတင်းသမားတွေခံရတဲ့ ဖိအား
မြင့်ကျော် ● ဘာပြဿနာတွေရှိခဲ့တာလဲ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၈ (ဒီအကြောင်းတွေကို သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ရွေးချယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိရှိ သူတယောက်အနေနဲ့ ပြောပြဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်လို့ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ထဲ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်နေသူ...
မြင့်ကျော် ● လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်သားကောင်းများ (မိုးမခ) မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တို့ ထိစပ်ရာ မြန်မာနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ် ထိစပ်ရာဒေသ...
မြင့်ကျော် – မငြိမ်းချမ်းတဲ့ ရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့ ညများ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီလဆန်း ရှမ်းမြောက်ဒေသကို သွားရောက်တဲ့ ၆ ရက်တာအတွင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်း ၇ ခုကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။...
စစ်ဘေးရှောင်စခန်းက ဆံပင်ညှပ်ဆရာ ၂ဦး (မြင့်ကျော်) မိုးမခဓာတ်ပုံ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈ မတူညီတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်း ၂ ခုက ဆံပင်ညှပ်ဆရာ ၂ ဦး ။ မန့်ဝိန်းကြီး – ကေဘီစီအမှတ် (၁)...
မြင့်ကျော် – သတင်းသမားတွေခံရတဲ့ ဖိအား
Illustration – Cartoon ATH မြင့်ကျော် – သတင်းသမားတွေခံရတဲ့ ဖိအား (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၇ဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူတွေက တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ သတင်းဌာနတွေက ရေးသားမှုတွေထက် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က ပြောဆိုတာတွေကို ပိုအလေးထားလာကြတာတွေက...
မြင့်ကျော် ● ၈၈ ဒုက္ခပြွှမ်းတဲ့ ခရီးနဲ့ သီချင်းသည် အမှတ်တရ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂၀၁၆ ဝေးသွားတဲ့အခါ………. .နှလုံးသားမှာ ……အမြဲတမ်းသတိရနော်… သွားလေသူ ကိုကျော်မြင့်လွင်ကို သတိရစွာဖြင့် ကာရာအိုကေရောက်တဲ့အခါ ဆိုဖြစ်တဲ့...
မြင့်ကျော် – ဂီတရဲ့ စွမ်းအား (သို့ ) တေးဂီတနဲ့ အတိတ်က အဖြစ်အပျက်
Photo – Aung Htet မြင့်ကျော် – ဂီတရဲ့ စွမ်းအား (သို့ ) တေးဂီတနဲ့ အတိတ်က အဖြစ်အပျက် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၆ သမီးက မအိပ်သေးတော့...
မြင့်ကျော် – အဖေနှင့် အတိတ်က ပုံရိပ်များ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၆ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၏ အစ ၄၈ နာရီမပြည့်မီတွင် အဖေလူ့လောကထဲမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ၂၀၀၂...
မြင့်ကျော် – အမှတ်တရ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅ ဝေးသွားတဲ့အခါ………. .နှလုံးသားမှာ ……… သွားလေသူ ကိုကျော်မြင့်လွင်ကို သတိရစွာဖြင့် ကာရာအိုကေရောက်တဲ့အခါ ဆိုဖြစ်တဲ့ သီချင်းတပုဒ် ထူးအိမ်သင်ခေါ် ကိုကျော်မြင့်လွင်နဲ့ ဒုက္ခပြွမ်းတဲ့...
Myanmar Journalist Network and Myanmar Press Council (Interim) member U Myint Kyaw. Photo: Aung Khant / The Myanmar Times...